Mpitsikilo mpanao lalàna tsy fantatra anarana, ny Fiangonan'izao tontolo izao Switzerland (WKG)
Ny fametrahana fanamafisana be loatra amin'ny fampisehoana sy ny utility dia fahazarana mieritreritra izay mitaky fotoana ela tsy hisarahana. Raha tsy manao izay andrasana hataon'izy ireo ny mpivady, dia vetivety foana na ho diso fanantenana na dia mangidy aza rehefa ela. Ray aman-dreny maro no mametraka ny fanerena tsy ilaina amin'ny zanany. Izany dia mety hitarika ho amin'ny fiterahana ambany, na olana ara-pihetseham-po. Ao amin'ireo fiangonana, ny fankatoavana sy ny fandraisana anjara amin'ny zavatra iray (na vola na hafa) matetika no kianja farany amin'ny sanda.
Misy vondron'olona hafa hitsara tsirairay miaraka amin'ny tanjaka sy hafanam-po be tokoa ve? Tsy olana tamin'i Jesosy io fironana be loatra io. Nahita ilay lehilahy tao ambadiky ireo asa atao izy. Rehefa nentin'ireo Farisiana ny vehivavy izay efa nanitsakitsa-bady dia tsy nisy nahitany afa-tsy izay nataony (aiza ilay sakaizany?). Hitan'i Jesosy fa mpanota irery izy, izay somary nisavoritaka kely ary nanafaka azy tamin'ny fahamarinan'ny mpiampanga azy sy ny fanamelohan'ilay vehivavy ho zavatra.